Madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay in uu tartami doono doorashada 15-ka May dhacaysa - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay in uu tartami doono doorashada 15-ka May dhacaysa
May 9, 2022 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweyne Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in uu tartami doona doorashada 15-ka May dhacaysa.
Muuqaal kooban oo lagu daabacay akoomadiisa gaaraka ah ee baraha bulshada, waxa uu kaga codsaday xildhibaanada labada aqal in ay codkooda siiyaan.
Farmaajo, oo madaxweyne loo doortay bishii Febaraayo 2017, ayaa la loolamaya tobonaan musharixiin ah oo ka soo horjeeda oo ay ka mid yihiin labo madaxweyne oo hore Xasan Shiikh Maxamuud iyo Shiikh Shariif Shiikh Axmed, raysulwasaare hore Xasan Cali Khayre, iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
Doorashada Soomaaliya ayaa qorshuhu ahaa in ay dhacdo bishii Febaraayo 2021, balse dib ayay u dhacday sababo kala duwan oo ay ugu weyntahay khilaaf siyaasadeed.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex qof oo ay kamidyihiin askar katirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhimatay in ka badan labo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax miinada dhulka lagu aaso ah oo ka dhacay caasimada [...]